DHAGEYSO:- Khilaaf Xoogan Oo Ka Dhax Taagan Hogaanka Baarlamaanka Hirshabeelle Iyo Muushin Laga Gudbiyay | Radio Banadir
Home Dhacdooyinka DHAGEYSO:- Khilaaf Xoogan Oo Ka Dhax Taagan Hogaanka Baarlamaanka Hirshabeelle Iyo Muushin...
DHAGEYSO:- Khilaaf Xoogan Oo Ka Dhax Taagan Hogaanka Baarlamaanka Hirshabeelle Iyo Muushin Laga Gudbiyay
Jimco RBB News:- Xildhibaan Aadan Cabdi Faarax (Kala-Dire) oo katirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Hirshabelle Oo Wareysi gaar ah Siiyay Idaacada Banaadir ayaa xaqiijiyay in Uu Jiro Khilaaf Ka dhaxeeya Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed iyo Kuxigeenkiisa Koowaad.
Xildhibaanka ayaa Sheegay in Habeen walbo ay usoo Dhacaan fariimo lagu sheegay in uu jiro kulanka xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabeelle Balse ay Xildhibaadu kujiraan bilihii fasaxa ahaa oo ay jiraan dhul doorashadoodii.
Xildhibaanada Baarlamaanka Maamul Goboleedka Hirshabelle ayaa bilaabay inay saxiixaan mooshino ka dhan ah Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo guddoomiyaha baarlamaanka Cismaan Barre Maxamed oo haatan ku sugan magaalada Beledweyne.
Xildhibaanada Hirshabelle ayaa ku eedeeyay guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle iyo Madaxweynaha Hirshabelle xil gudasho la’aan iyo ku takrifal awoodeed iyo inay jebiyeen qodobo dastuuri ah.
Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee baarlamaanka Hirshabelle Cabdi Xuseen Geedi ayaa u direy fariino xildhibaanada baarlamaanka inay isugu yimaadaan kulamo caadi ah.
Mar wax laga weydiiyay in uu sharci yahay Muushinka Iyo Inkale ayuu ku jawaabay in ay qaldanyihiin Xildhibaanada abaabulaya muushinka ayna kusuganyihiin Magaalada Jowhar, waxa uuna Ugu Baaqay in ay joojiyaan muushinkaasi si khalalaaso aan looga abuurin deegaanada Maamulkaasi.
Isfahan daro soo kala dhax gashay Hogaanka Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sababay Muushinka Sida uu Idaacda Banaadir u xaqiijiyay Xildhibaan Aadan Cabdi Faarax.
Sidoo kale Xildhibaanka ayaa sharci daro ku tilmaamay in Kuxigeenka Baarlamaanka uu uyeero Xildhibaanada Ayagoo fasax kujira sidaasna uu qabin Dastuurka Maamulka Hirshabeelle.
Waxaana weli taagan khilaaf ka dhashay xiristii uu guddoomiyaha Baarlamaanka Cismaan Barre uu ku xirey kalfadhigii Baarlamaanka fariin uu u kala direy xildhibaanada Hirshabelle.
Dhowr Jeer oo hore ayaa sidaan oo kale Muushin looga gudbiyay Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare Iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Cusmaan Barre Maxamed balse Xildhibaanada ayaa ah kuwa lacag ku raadiya Muushinka Xilliyada qaar.
HALKAN KA DHAGEYSO WAREYSIGA:-
Next articleMilatariga Israel oo dilay sargaal ka tirsanaa ururka Xamaas